Unoda Kuti Uzive Zvakawanda Pamusoro Pechikamu Chinoendesa? - Bvunza The Expert Of Semalt, Natalia Khachaturyan
Kudzokorora chigamba chepakutanga kupfuura makumi maviri kaviri kuedza kugadzira makopi akawanda okutanga kunogona kutungamirira kudzokorora kwehuwandu. Munyika ye kutsvaga injini optimization (SEO), kununura uye kutumira zvinyorwa zvitsva pawebsite yako nguva dzose zvinokosha zvikuru. Kupa uye kubudisa zvinyorwa pane yako e-commerce webhusaiti kunobatsira kutora maziso evashanyi uye kunorova chinangwa chako munguva chaiyo.
Sangano Rokutsigira Semalt , Natalia Khachaturyan, anoti vashandi vewebhu vakadai seGoogle vanoshandisa zvimwe zviitiko kuti vafananise webhusaiti yako mumagadziridzo, kutendeuka kwechinhu chako kuva chimwe chezvinhu zvakakosha. Sezvo mutengesi wezvakagadzirwa, haudi kuti kutendeuka kwechinhu chako kuve chakakosha mumatsotsi ekutsvaga injini - crear nuevo sitio web iis 7. Kuumba kuonekwa paIndaneti kunoita kuti tive vakangwarira uye zvisikwa.
Chii chinyorwa chinotsvaga?
Kugadzira shanduro dzakasiyana dzeimwe chikwata kuti uone zvakakwirira mumarongerwo ezvinhu zvinogona kushatisa SEO campaign yako. Maererano nekutsvaga injini yekugadzirisa nyanzvi, nyaya yekutsvaga ndeye tsvuku nyemba yeSEO technique, inowanzoshandiswa sechitsvaga nevanotengesa vhidhiyo uye vanogadzira. Mune pfungwa chaiye, kubudisa zvinyorwa uchishandisa uropi hwako kunopedzisa kutora nguva kana uchienzanisa nekuchera imwe nyaya iripo.
Kugadzira haisi nzira iyo inouya pakuvandudza bhizimisi rako kuonekwa. Paunenge uchitsvaira imwe nyaya, chigumo-chigumisiro chekupedzisira hachifaniri kuva nechinangwa. Kuedza kudzokorora zvakare zvinyorwa zvako zvinyorwa kakawanda zvitsva ku keyword stuffing. Google ine nzira yekuziva chinhu chikuru chekugadzirisa zvinhu uye nyaya yekufuratira..
Kutumira zvinyorwa zvinoshandiswa paWebsitePress website zvinogona kukuvadza kukurudzira kwako. Kana iwe uchiramba uchitumira zvisikwa zvepuniti pawebsite yako, vashandi vako vanogona kuguma nekucheuka kumashure mapeji ako, zvichiita kuti nguva yakaderera isati yasvika uye kuwedzera kwehuwandu hwehuwandu. Kukwidziridza kwepamusoro maitiro hazvina kukodzera kumabhizimusi epaIndaneti uye kunogona kutungamirira kukurumidza kuwira mukutendeuka kwako kwechinyorwa chekutsanangurwa sezvo mutsara unokosha unofungidzirwa kuti haina musoro nekutsvaga injini.
Kubudisa mazana kana zviuru zvemashoko echinyorwa chimwechete zvinogona kuva zvishoma. Iyi ndiyo iyo nyaya yekutsvaga software inopinda. Chinyorwa spinner chinogona kuita kuti iwe uve akakwirira mumashandisirwo ezvinhu munguva chaiyo. Zvisinei, nyaya dzakabudiswa nenyaya inoshandiswa nevaya vanotsvaga zvakaoma-ku-kuverengwa nekuda kwekushandiswa kwemashoko akasiyana-siyana nemitsara.
Chinyorwa chekutsvaga chinopa mhinduro?
Chirevo chekutsvaga chimwe chezvitsva zvisingatendwi zvinogona kuita kuti shanduko yako yekutendeuka ive yakakwirira mukati penguva shoma yenguva. Zvisinei, kuvandudza nzvimbo dzako dzekuonekwa kuburikidza kushandisa maitiro matsva eSeO maitiro mashomanana achazoguma asingagamuchiri mushandirapamwe wako munguva yemberi.
Chinangwa chekutanga chekutsvaga nyaya ndechekuumba mamwe mapeji anotaura nezvenyaya imwechete yekufarira seyopi yepakutanga. Mushure mokusika zvinhu zvakasvibiswa, vatengesi vedigari vanopedzisira kusanganisira backlinks kune nzvimbo dzavo mukati mezvakagadzirwa. Mukufamba kwenguva, zvisungo zvinoreva kutsvaga injini dzavanozivikanwa uye dzinopedzisira dzichigumisa kushandura nzvimbo dzavo kune chinzvimbo chakanaka pamusoro pezinga.
Kubudisa zvinhu zvakanaka zvemashoko akafanana zvinogona kuva zvishoma. Sezvo mutengesi, unogona kusarudza kushandisa sarudzo spinner kuti ugadzire makopi akawanda ebhuku rako rekutanga. Zvisinei, Google ichagara ichitarisa zvinyorwa. Chimbofunga nezvekushandisa mawaniro akachena machena e SEO maitiro ekuva nemhinduro kwenguva yakareba yekutengesa kwako paIndaneti.